Fanadihadiana Uhans H5000, finday avo lenta misy batterie 4.500 mAh ho an'ny € 95 | Androidsis
Fanadihadiana Uhans H5000, bateria farany ambany misy batterie 4.500 mAh amin'ny € 95
Amin'ity indray mandeha ity isika dia handeha hamakafaka ny Uhans H5000, iray amin'ireo maodely farany indrindra natolotry ny mpanamboatra sinoa Uhans ary tsikelikely dia manao zana-tsena noho ny sasany terminal farany ambany amin'ny vidin'ny fifaninanana. Amin'ity tranga ity, ao amin'ny Uhans H5000 ny tena misongadina indrindra dia ny bateria, satria manana 4.500 mAh ahafahantsika manitatra ny fizakantenany mankany 4 andro fampiasana tsy misy olana. Ny vidiny dia € 95.
1 Drafitra marefo kokoa nefa marina
2 Toetra ara-teknikan'ny Uhans H5000
3 Fakan-tsary Uhans H5000
4 Bateria 4.500 mAh
7 Famaranana farany momba ny Uhans H5000
8 Hijery horonan-tsary Uhans H5000
9 Uhans H5000 Photo Gallery
Drafitra marefo kokoa nefa marina
Ny Uhans dia telefaona ambany ary miseho amin'ny azy izany endrika mahonin-tena tsy misy filalaovana be fa miasa miaraka amin'izay. Ny terminal dia misy amin'ny volamena sy volondavenona; Araka ny hitanao amin'ny sary, ny maodelinay dia volamena, izay tena tsara tarehy indrindra amin'ity modely ity. Ny tranga H5000 plastika io, zavatra mahazatra indrindra eo amin'ny sehatry ny fidirana na dia efa misy modely sasany aza - na dia somary lafo kokoa aza - vita amin'ny vy. Boribory somary boribory ny sisiny, izay tsy isalasalana fa manatsara ny fangejana telefaona sy manampy kalitao. 180 grama ny lanjany ary 12 milimetatra ny hateviny, somary avo kokoa noho ny salan'isa izy io saingy ara-dalàna izany satria any amin'ny toerana iray dia tsy maintsy apetrak'izy ireo ilay bateria 4.500 mAh. Ny telefaona toa tsara eo an-tanana ary tena madio io satria tsy mahatsikaritra karazana dian-tongotra ianao.
Miloka amin'ny fahatsorana, ny faran'ny smartphone dia misy lavaka ho an'ireo mpandahateny. Eo amin'ny ilany ankavanana dia ho hitantsika ireo bokotra telo (habetsahana sy hery) telo fotsiny ny eo aloha tsy manana bokotra mikasika, misafidy amin'ity tranga ity ho an'ireo bokotra tafiditra ao anaty efijery ihany.
Ny efijery dia 5 santimetatra ary ny tontonana dia karazana IPS. Ny fanapaha-kevitra faratampony dia 1280 x 720 teboka ary manao ny asany izy io na dia tsy mahita mamirapiratra kely aza isika mba hanana vokatra manintona kokoa.
Toetra ara-teknikan'ny Uhans H5000
Ny smartphone Uhans dia tonga miaraka amin'ny Processeur Quad-core MediaTek izay manana ny endriny dia ampy ho an'ity karazana maodely ity, ankoatry ny fitsitsiana bateria sasany. Ny GPU tafiditra dia a Mali-T720 hahafahantsika mihazakazaka lalao misy fepetra takiana antonony saingy hianjera kely kely ho an'ireo lalao izay mitaky ny haavon'ny fitaovana io.
Amin'ny haavon'ny Fahatsiarovana RAM sy ROM izay nahagaga anay manana 3 GB sy 32 GB tsirairay avy, betsaka lavitra noho ny nandrasana ary mamela ny Uhans hihazakazaka amin'ny fampiharana 30 miaraka amin'izay tsy misy olana. Ny fitadidiana ROM dia azo hitarina amin'ny alàlan'ny karatra microSD raha ilaina.
Amin'ny haavon'ny fifandraisana, ny fitaovana dia manana Wifi 802.11b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS ary fifandraisana. 4G / LTE mifanaraka amin'ny tarika Espaniôla, fiasa fototra fa tena ilaina.
Ny rafitra fiasa dia ny kinova farany an'ny Android 6.0 Marshmallow tsy misy fanovana azo atao momba ny kinova mahazatra an'ny Google.
Fakan-tsary Uhans H5000
Mikasika ny fizarana sary, ny fakantsary an'ny Uhans H5000 marina ary mahavita ny asany na dia amin'ny fomba tsotra aza. Ny fakan-tsary any aoriana dia 8 megapixels miaraka amin'ny sensor Sony IMX219 sy flash LED raha ny eo aloha mijanona amin'ny 5 megapixel ary mametraka tabataba ao anatin'ireo sary alaina. Raha ny fahitanay azy dia io no teboka malemy indrindra amin'ny smartphone ary eto dia manana toerana hanatsarana ireo maodely ho avy ireo tovolahy avy any Uhans.
Araka ny efa nolazainay tetsy ambony, ny batterie an'ny Uhans H5000 dia eo akaikin'ny RAM sy ROM ny teboka matanjaka amin'ity modely ity avy amin'ny mpanamboatra aziatika. Ny 4.500 mAh dia manome ny fahaleovan-tena hatramin'ny 4 andro raha mampiasa ara-dalàna ianao, fa na dia be mpampiasa aza dia haharitra 2 andro farafahakeliny. Ho fanampin'izany ny teknolojia MediaTek Pump Express fiampangana haingana mamela antsika handoa haingana ny bateria, zavatra tena ilaina tokoa rehefa manana bateria manana fahaiza-manao toa izany ianao.
ROM 32GB mivelatra amin'ny alàlan'ny microSD
Fakan-tsary tsy dia misy kalitao
Famaranana farany momba ny Uhans H5000
Ny Uhans dia terminal izay 95 ihany no manolotra antsika a haavon'ny herinaratra mahaliana misaotra an'io RAM 3 GB io. Raha mitady modely mora vidy ianao, dia mety izany ary izany maharitra ny bateria andro maromaro tsy misy olana dia io no tadiavinao.
Hijery horonan-tsary Uhans H5000
Raha te-hijery famerenana horonantsary momba ny H5000 ianao dia ity misy horonantsary iray izay avy amin'ireo mpiara-miasa aminay Vaovao momba ny gadget. Ary raha liana amin'ity karazana fandalinana ity ianao dia manoro hevitra anao aho misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube azy amin'ny fipihana eto na amin'ny bokotra manaraka. '
Uhans H5000 Photo Gallery
Avelanay eto aminao ny sary sy ny antsipiriany rehetra momba ny maodely Uhans vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fanadihadiana Uhans H5000, bateria farany ambany misy batterie 4.500 mAh amin'ny € 95
Rafael Palacios dia hoy izy:
Tena ratsy izany fa tsy misy ho an'i Amerika na Amerika atsimo. Raha ny vidiny dia heveriko fa tena tsara izany.
Valiny tamin'i Rafael Palacios
Ny rindranasa tsara indrindra hanovana sy hamerenana sary